xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: April 2011
နေတိုးစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကဒါဖီ၏သားအငယ်ဆုံးနှင့် မြေးငယ် ၃ဦးသေဆုံး
နေတိုးစစ်အုပ်စု၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကဒါဖီနေအိမ်ပျက်စီးသွားစဉ်
နေတိုးစစ်အုပ်စု့ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ သားတဦးနဲ့ မြေးသုံးဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး မိုမာကဒါဖီကတော့ အသက်ရှင် လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ စနေနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာတော့ အခုလို ကဒါဖီသားတဦးနဲ့ မြေးသုံးဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတာ လစ်ဗျားအစိုးရပြောခွင့်ရသူ မူဆာ အီဗရာဟင်က အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။(အောက်ပုံ)
အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် ဆာရီ အယ် အာရဗ် ကဒါဖီ နဲ့ကဒါဖီရဲ့မြေးတွေဟာလစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ကဒါဖီကို နေတိုးတပ်ဖွဲ့က လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှု အတွင်းမှာ သေဆုံးသွားရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။မစ္စတာကဒါဖီနဲ့ သူ့ဇနီးဖြစ်သူဟာ အဲဒီအချိန် သူ့သားနေအိမ်မှာရှိနေပေမယ့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှု မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အိမ်ကတော့ အတော်လေး ပျက်စီးသွားကြောင်းလဲ ဆင်ဟွာသတင်းတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
ခေါ့ကိုဗို(ရုရှား) - သူတို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် တကယ့်တင့်ကားတွေ၊ ဒုံးပျံ တွေ အတိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ရုရှားလက်နက် တိုက်မှ လက်နက်တချို့ဟာ သူတို့ကို မြင်ရသလိုမဟုတ်ဘူး။
ကြည်းတပ်အတွက် လေသွင်းထားတဲ့ပုံတူတွေတိုးပြီး လုပ်ပေးနေရ တယ်။ အလားအလာရှိတဲ့ ရန်သူတွေကို လှည့်ဖြားဖို့အတွက် ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်သုံးပြီး၊တည်ကြက်တွေကိုချထားပြတယ်။
မော်စကိုမြို့ ဆင်ခြေဖုံးမှာရှိတဲ့ ခေါ့ကိုဗိုအရပ်က အလုပ်ရုံတစ်ရုံဟာ လေသွင်းပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ ရပ်စ်ဘောကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိကဖောက်သည်ဖြစ်တဲ့ ရုရှားတပ်မတော်အတွက် လက်နက်အတု တွေကို ချုပ်လုပ်ဖန်တီးပေးနေကြရတယ်။
စစ်ပစ္စည်းပုံတူတွေထုတ်လုပ်ပေးနေ တဲ့ ရပ်စ်ဘောကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။တီ-၈၀ တင့်ကား တွေ၊ အက်စ်-၃၀၀ ဒုံးပျံ တွေ၊ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေလို ပစ္စည်းမျိုးကို ချုပ်လုပ်ပေးရတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လေသွင်းရဲတိုက်ကြီး တွေနဲ့ တခြားကလေးကစားစရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုမှ မင်းသားဝီလျံနှင့် သတို့သမီးကိတ်မစ်ဒယ်လ်တန် တို့၏ မင်္ဂလာပွဲ အထိမ်းအမှတ် ပုံ
Labels: နေ့အလိုက် သတင်းဓါတ်ပုံများ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သတင်းများတွင် လက်ရှိအစိုးရ၏ သမ္မတကြီးဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန်က အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးပါ အကြံပေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် သတင်းသည်လည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်လေသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ ဥပဒေ အကြံပေးဟူ၍ အဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ရှိပြီး စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့ကို ဒေါက်တာဦးမြင့် က၄င်း ၊ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကို ဦးကိုကိုလှိုင် ကလည်း ၊ ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့ကို ရဲမှုးကြီးဟောင်း ဦးစစ်အေးမှ ၄င်း တာဝန်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုလည်း သတင်းများအရသိရပါသည် ။
သာမန်အားဖြင့် ထိုသတင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော သတင်းမျှသာဖြစ်လေသည် ၊ သမ္မတသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးသော မူဝါဒများ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ပညာရှင်များ အပြင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် အထူးကျွမ်းကျင်ကြသော ပညာရှင်များထံမှ အကြံဥာဏ်များရယူကာ ဆောင်ရွက်သွားတော့မည် ။ ကောင်းသည် ကြိုဆိုကြသည်ပေါ့ ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:11 PM
အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသတွင် ယနေ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေသော ပါလက်စတိုင်းစစ်သည်များ
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:11 AM
လစ်ဗျားတွင် ကဒါဖီအစိုးရနှင့် သူပုန်တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဗဟို သဖွယ်ဖြစ်နေသော မက်စ်ရာတာ မြို့ ဆိပ်ကမ်းတွင် စစ်ကြောင့်ပျက်စီး သွားသော မော်တော်ယာဉ်များ
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:03 PM
(ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ restoring confidence and transforming institutions ထဲက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလမှာ နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲတဲ့အခါ တွေ့ရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံအခြေ အနေနဲ့ ထင်ဟပ် လေ့လာနိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။)
လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အာဏာရယ်၊ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှုရယ်ကို ဖြစ်စေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုင်တွယ်ထားတဲ့ အင်စတီ ကျူးရှင်းတွေကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်တဲ့အခါတိုင်း ပြင်းထန်တဲ့ ဆွေးနွေး ငြင်းခုန်မှုတွေ၊ ခုခံ ကာကွယ်မှုတွေနဲ့ ကြုံရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်မှာ အခုကြိုးစားနေတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်နဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားမှု၊ အနောက် ဥရောပမှာ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် ပြည်သူ့ရေးရာ ၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားမှုတွေကို ကြည့်ရင်လည်း ဒီလို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်မှုတွေ ရှိတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောရရင် အပြောင်းအလဲ လုပ်တိုင်း အငြင်းပွားမယ်၊ ပေးဆပ်ရမှုတွေ ရှိမယ် ဆိုတာ သေချာတယ်။ တစ်ချို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ကြတော့ တစ်ချို့အုပ်စုတွေ အနေနဲ့ ယာယီ နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိရင်တောင် အားလုံး အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုပြီး အပြောင်းအလဲကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ပြောင်းလဲဖို့ အတော် ခက်ခဲတာကို တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခ တစ်ခုက ကျော်လွန် လာတဲ့ နိုင်ငံတစ်ချို့မှာ ပိုခက်ခဲလေ့ ရှိတယ်။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့ ဂျပန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံ တစ်ချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အင်စတီ ကျူးရှင်းတွေကို အချိန်တိုအတွင်း လွယ်လွယ် ကူကူ၊ ချောချောမွေ့မွေ့ အသွင်ကူးပြောင်း နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ငံတွေက အင်စတီ ကျူးရှင်းတွေ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံက ဟိုတုံးထဲက ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို လူမျိုးရေး အရလည်း အဓိကလူမျိုးစု တစ်ခုတည်း နီးပါးလာက်ရှိတယ်။ လူသား အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ စာတတ်မြောက်မှု၊ အစဉ်အလာ ကောင်းတဲ့ ပညာရေးစနစ် (အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာ) တွေရှိပြီး ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရလည်း ပါတီတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ရှိခဲ့၊ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ကြုံခဲ့ ရတာက ပြည်ပနိုင်ငံနဲ့ ဖြစ်ပွားတဲ့စစ် ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ် မဟုတ်ဘူး။
နေတိုး၏ ၂၄ ရက်နေ့ည လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကဒါဖီနေထိုင်ရာ အဆောက်အဦတစ်ခု ပျက်စီးသွားပုံ
( ဒီလိုလက်နက် ငွေကြေးအင်အားအများကြီးအသာစီးယူပြီးမှ တိုက်ရဲသူတွေဟာ သူရဲပေါ ကြောင်သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ကဒါဖီရဲ့သားဖြစ်သူက တုန့်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ် )
ထိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တိုက်ပွဲ ၄ ရက်ဆက် ဖြစ်ပွား
ထိုင်းနှင့်ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့များကြား အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများ တနင်္လာနေ့မနက်မစောပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြန်ရာ နှစ်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့များကြား ၄ ရက် ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး Ta Moan နှင့် Ta Krabei ဘုရားကျောင်းများတည်ရှိရာ Oddar Meanchey ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
" ဒီမနက်စော ၆နာရီ ၁၅ လောက်ကနေစပြီး ဘုရားကျောင်း ၂ ကျောင်းနားမှာ နှစ်ဘက် ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ် နေတာပါ " ဟု ကမ္ဘောဒီးယား အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ဒုတိယ အကြီးအကဲ Suos Sothea က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေရာမှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောကြားကြောင်း ဆင်ဟွာ သတင်းဌာန ကဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။ထိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ မိမိတို့ဘက်ကို လက်နက်ငယ်တွေရော လက်နက်ကြီးတွေ နဲ့ပါပစ် ခတ်နေတာ ဖြစ် ကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်နက် ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှု များ ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သူကဆက်ပြောပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:24 AM
အမေရိကန်တပ်သား ၀ီကီလိခ်သို့ သတင်းပေးဟုစွပ်စွဲခံရ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်စစ်ကြောမှုများရှိနေဟုသိရ
နာမည်ကျော် လျှို့ဝှက် သတင်းများ ဖွင့်ချသည့် Wikileaks သို့ သတင်း ပေါက်ကြား စေသူဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသော အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးကို ဆက်ဆံပြုမူပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများ ခံထားရသော အိုဘားမား အစိုးရသည် အဆိုပါတပ်သား ဘရက်ဒလီမန် နင်းကို ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ် ကွမ်တီကို ဒေသ ရေတပ်စစ် စခန်းတစ်ခုတွင် ထိန်းသိမ်းထားရာမှ ကန်ဆက်စစ်အခြေစိုက် ဖော့လီဗန်ဝေါ့ရှိထောင်သို့ ရွှေ့လိုက်ကြောင်း ပင်တဂွန် အထွေထွေ ကောင်စီမှ အရာရှိ ဂျက်ဂျွန်ဆင်ကပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ရိုက်တာသတင်းကဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
ဘရက်ဒလီမန်နင်းကို အရေးကြီး သော သံတမန်ရေးနှင့် စစ်ရေးအချက် အလက်များ ပေါက်ကြားစေခြင်း မသင်္ကာ မှုဖြင့် ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် အဆိုပါ တပ်သားကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် စစ်ကြောမှုများရှိနေကြောင်း ၎င်း၏ ရှေ့နေများက ကန့်ကွက်ထားသည်။ အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ပိတ်လှောင်ထား ခြင်း၊ အဝတ်အစား မပါဘဲအိပ်စေခြင်း၊ မကြာခဏ လာနှိုးခြင်းများရှိကြောင်း ရှေ့နေများက ဆိုသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အကြိမ်အနည်းငယ်သာ လုပ်ခဲ့ကြောင်း ပင်တဂွန်က ၀န်ခံပြောဆိုထားသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:40 AM
Labels: ၀ီကီလိခ်, နိုင်ငံရေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အန်ဒရာ ပရာဒက်ရှ် (Andra Pradesh) ပြည်နယ်က တန်ခိုးရှင်အဖြစ် ကျော်ကြားတဲ့ အသက် ၈၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆိုင်းဘာဘာဟာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ သူ့ကျောင်းဝင်းနားက ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန် သွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ် ။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှ ကြည်ညိုသူတွေက ဘုရားတဆူလို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဆိုင်းဘာဘာဟာ နှလုံး၊ အဆုတ်နဲ့ ကျောက်ကပ်လို ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်တော့တဲ့အတွက် သူနေထိုင်ရာ ပွတ္တာပါတီ (Puttaparti) ရွာက ဆေးရုံကို တင်ထားခဲ့တာ သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံ Canakkale တွင်ကျင်းပသည့် အော်တိုမင်အင်ပါယာမှ လွတ်မြောက်ခြင်း ၉၆ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းနားတွင် စစ်သည်တော်များ မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြစဉ်
ဒီနေ့တော့ မတ်လ ၁၁ ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားရတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို ထားရှိတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ သူတို့ဘယ်လိုနေထိုင်နေကြတယ် ဆိုတာကို ထင်ဟတ်စေတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။
ဒီပုံတွေကို ဂျပန်သတင်းထောက်တွေရိုက်တာပါ ဒီလောက်အပျက်အစီးတွေ သောကတွေ ဒုက္ခရောက်နေမှုတွေ ကြားမှာ ဂျပန်သတင်းထောက်တွေဟာ ကောင်းကွက်လေးတွေရှာပြီး ကမ္ဘာကို တင်ပြနေတာပါ...ကျွန်တော်တို့ဆီက ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဆိုးကွက်ကိုရှာရိုက်ပြီး ကမ္ဘာကိုဖြန့်တဲ့ အလုပ်နဲ့ထမင်းစားနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ချင်း ဘယ်လောက်တောင် ကွာကြသလဲဆိုတာကို တင်ပြချင်တာပါ ။ အဲလိုရတဲ့ပိုက်ဆံကို သူတို့မို့မျိုကျတယ်ဗျာ....
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှကလေးငယ်တစ်ဦးနှင့် ကြက်ခြေနီတစ်ဦး သောချိတ်လေးနဲ့ ကစားနေတဲ့ပုံပါ
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:18 PM
ထိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တွင် ဘုရားကျောင်း ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွား ရာမှ နှစ်ဘက်အကျအဆုံး များရှိသည်အထိ သောကြာနေ့က တိုက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ (စနေနေ့) မနက်ပိုင်းမှာလည်း နှစ်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ များအကြား လက်နက်ကြီးများဖြင့် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အသေးစိတ်ကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး ။
ဒီလိုဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ အခင်း ဖြစ်ပွားရာဒေသမှ အိမ်ထောင်စု ၁၄၂၀ မှ လူဦးရေ ၅၀၀၀ ခန့်ဟာ မိမိတို့အိုးအိမ်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ကီလိုမီတာ ၃၀ ကျော်လောက်ဝေးတဲ့ Nhim Vanda ဒေသကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် နေကြကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:13 AM
မြန်မာအစိုးရသစ် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ အဆင့်မြှင့်တင်၊ ၅နှစ်အတွင်း GSM မိုဘိုင်းလိုင်း သန်း ၃၀ထိတိုးချဲ့မည်
ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ၏ ရတနာပုံတယ်လီပို့
မြန်မာပြည်သူများ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆက်တွဲ အခက်ခဲများကျော်လွှား နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ တိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ကျင်းပသော အထူးစီမံကိန်းများ အကောင်ထည် ဖေါ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းဝေးတွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြောင်းယနေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည် ။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် အခုအခါ နိုင်ငံတော်၏ Telephone density မှာ ၅% ခန်.သာရှိကြောင်း သို့ဖြစ်ပါ၍ Telephone density အမြန်တိုးတက်လာစေရေး အတွက် GSM မိုဘိုင်းလိုင်းများ အမြန် တိုးချဲ့ တပ်ဆင်နိုင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် လိုင်း ၄သန်း ၊ ဒုတိယနှစ်တွင် လိုင်း ၅ သန်း ၊ တတိယနှစ်တွင် လိုင်း ၆သန်း ၊ စတုတ္ထနှစ်တွင် လိုင်း ၇ သန်း ၊ ပဉ္စမနှစ်တွင် လိုင်း ၈ သန်း စုစုပေါင်း လိုင်း သန်း ၃၀ တပ်ဆင်နိုင်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းကာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း စီမံကိန်းကာလ ပြီးစီးပါက Telephone density မှာ ၅၀.၆% ထိရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြသွားပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:08 PM
ယနေ့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကမ္ဘာမြေကြီးနေ့ တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက သစ်တောပြုန်းတီးမှုကာကွယ်ရေး ဆန္ဒပြ လှုပ်ရှားနေကြစဉ်
(Aman Rochman, AFP)
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:46 PM
ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွင်း ဒဏ်ရာရ ထိုင်းစစ်သားတဦးကို Surin ခရိုင်၊ Phnom Dongrak ဒေသ ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နေစဉ် (ဧပြီလ ၂၂၊ ၂၀၁၁)
ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘုရားကျောင်းတခုကို ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားရာကနေ နယ်စပ်ပြဿနာတွေ အထိ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့(သောကြာနေ့)မှာဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲတခုမှာ နှစ်ဖက် တပ်ဖွဲ့တွေကြား ပစ်ခတ်မှုတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး နော် နမ်ဟောင် ကတော့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဌ ထံကို ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပေး ကန့်ကွက်ထားတဲ့ တိုင်ကြား စာတစ်စောင် ပေးပို့ထားကြောင်းလဲ သိရပါတယ် ။
ကမ္ဘောဒီးယားဘက်က စစ်သား ၃ ယောက် ကျဆုံးပြီး ၆ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယား တပ်မတော် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းဘက်မှာလည်း စစ်သည် ၂ ဦး ကျဆုံးပြီး အနည်းဆုံး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းတပ်မတော် အကြီးအကဲတွေက ပြော ကြားကြောင်းသိရပါတယ်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံ Schwaneberg မြို့ရှိ ကျူးလစ်ပ် ပန်းစိုက်ခင်းတစ်ခုတွင် ပန်းစိုက်ပျိုးသူများ ပန်းခူးနေကြစဉ်
(Jens Wolkf, AFP)
မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အင်အားပြင်းငလျင်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆူနာမီရေလှိုင်း များကြောင့် ဖူကူရှီးမားဒေသရှိ နျူကလီးယားဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီး ရေဒီယို ဓါတ်သတ္တိကြွ အန္တရာယ်ပျံ့နှံ့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ ထိုသို့ပြန့်နှံ့မှုကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်က ရုရှားနိုင်ငံ ချာနိုလ်ဘိုင်း ဓါတ်ပေါင်းဖိုပေါက်ကွဲကာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓါတ်ရောင်ခြည် ပျံ့နှံ့မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုလေ့ရှိပါသည် ။ အချို့က ဖူကူရှီးမားစက်ရုံမှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပျံ့ နှံ့မှုသည် ချာနိုဘိုင်းလောက်မဆိုးဟု ဆိုကြသည် ။ အချို့က အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြပြန်လေသည် ။အချို့ကမူ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားစက်ရုံက လူနေထူထပ်သောနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုဆိုးသည်ဟု ပြောကြပြန်လေသည် ။ထိုသို့ ပြောကြဆိုကြသူများမှာ ပညာရှင်များချည်း ဖြစ်နေပေရာ Voice Of Myanmar ပရိတ်သတ်အနေဖြင့် နှိုင်းယှဉ်သိရှိနိုင်ပါရန် ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:09 AM
မေလ ၉ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် နာဇီဂျာမဏီအား အောင်မြင်သည့် အထိမ်းမှတ် The Victory Day ကို ကရင်မလင်ရင်ပြင်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ စစ်ရေးပြစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ အလာဘီနို မြို့တွင် အစမ်းလေ့ကျင့်နေပုံ
(Natalia Kolesnikova, AFP)
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:47 PM
ကဒါဖီ၏ကွပ်ကဲမှုတပ်မကို နေတိုးလေယာဉ်များဗုံးကြဲ၊ သူပုန်များထံ စစ်ဆင်ရေးအကြံပေးများ နေတိုးစေလွှတ်
အနောက်အုပ်စု၏အထောက်ပံ့ဖြင့် အင်အားကြီးထွားလာနေသော လစ်ဗျားသူပုန်များ
လစ်ဗျားသူပုန်တွေ စနစ်တကျဖြစ်ဖို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေ၊ ဆက်သွယ်မှုတွေ တိုးတက်စေဖို့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အကူအညီပေးသွားဖို့ ဗြိတိသျှစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ၁ ဒါဇင်လောက်ကို လစ်ဗျားနိုင်ငံ စေလွှတ်မယ့်အကြောင်း ယမန်နေ့က ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ီလျံဟေ့ဂ် (William Hague) က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ အနေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ တော့ပါဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ် ။
လစ်ဗျားအစိုးရကို ပုန်ကန် တိုက်ခိုက်နေသူတွေကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကူညီသွားဖို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အစီအစဉ်မှာ နောက်ထပ် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အဖွဲ့ဝင် နှစ်နိုင်ငံလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်လာပါတယ်။ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာကဒါဖီ (Moammar Gadhafi) ရဲ့ သစ္စာခံ တပ်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ သူပုန်တွေကို လေ့ကျင့်မှုတွေမှာ ကူညီဖို့ သင်တန်းဆရာ ၁၀ ယောက် စေလွှတ်မယ်လို့ အီတလီ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Ignazio La Russa က ပြောဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အစောပိုင်းမှာလည်း လစ်ဗျားသူပုန်တွေအတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးတွေ စေလွှတ်မယ့် အကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံက ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြင်သစ် သမ္မတ နစ်ကိုလတ် ဆာကိုဇီ ဟာ လစ်ဗျားသူပုန်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် Mustafa Abdel Jalil နဲ့ ပဲရစ်မြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေ ထိန်းချုပ်ထားရာ အမာခံမြို့ဖြစ်တဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းက ဘန်ဂါဇီ (Benghazi) မြို့ကို သမ္မတ ဆာကိုဇီ လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်းလည်း တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာ လစ်ဗျား သူပုန် ခေါင်းဆောင်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:27 AM
Anti-government demonstrators gesture while chanting slogans demanding the resignation of Yemeni President Ali Abdullah Saleh in Sanaa.
By Muhammed Muheisen, AP 4/19/2011
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:32 PM
ဆီးရီးယား အတိုက်အခံကို အမေရိကန်ထောက်ပံ့မှု၊ ၀ီကီလိခ်ဖေါ်ထုတ်ချက် ၀ါရှင်တန်ပို့စ်ဖေါ်ပြ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအစိုးရကို တော်လှန်နေတဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစု တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်း တွေမှာ အသုံးပြုဘို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တိတ်တဆိတ်ငွေကြေး ထောက်ပံမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ၀ီကီလိခ် ခေါ်လျှို့ဝှက်ကြေးနန်းများ ဖေါ်ထုတ်နေ တဲ့ သတင်းဝက်ဆိုဒ်မှာ ဖေါ်ပြထားကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် ၀ါရှင်တန်ပို့ သတင်းစာ ကြီးမှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘက်ရှာ အယ်လ်အာဆတ်ကိုဆန့်ကျင်နေသူ အတိုက်အခံတွေကို အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဂြိုလ်တု ရုပ်သံထုတ်လွှင့် မှုတွေအပါအ၀င် မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဘို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းလောက်အထိ ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ ၀ီကီလိခ် လျှို့ဝှက် သံတမန် ကြေးနန်းတခုမှာ ဖေါ်ပြထားတယ်လို့ အဆိုပါသတင်းစာကြီးက ဆိုပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:13 PM
ကဒါဖီအစိုးရ ပြုတ်ကျသည်အထိ နေတိုးဆက်တိုက်မည် ၊ လက်ခံနိုင်တာထက်လွန်လာပြီဟု ရုရှားပြောကြား
နေတိုးစစ်အုပ်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဘာလင်မြို့တွင်ကျင်းပသော ကဒါဖီပြုတ်ကျရေး အစည်းဝေးတွင် တွေ့ရစဉ်
ကဒါဖီ အာဏာက ဆင်းသွားရတဲ့အထိ နေတိုးမဟာမိတ်တွေက ဆက်လက် တိုက်ခိုက်မယ်လို့ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နဲ့ အမေရိကန်တို့က ပြောလိုက်ကြပါတယ်။လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာကဒါဖီရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ နေတိုး ညွှန့်ပေါင်းမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေ ဆီက လေယာဉ်အကူအညီတွေ ထပ်မံတောင်းခံထားပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်း သဘောတူထားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
မနေ့တုန်းက ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့မှာ နေတိုးအဖွဲ့က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ ဆွေးနွေးပွဲတခု လုပ်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီမှာနေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အဲန်ဒါစ် ဖေါ့ခ်ျ ရပ်စ်မူဆန် (Anders Fogh Rasmussen) သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာ အကူအညီတွေဟာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရောက်လာတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လစ်ဗျားက မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေကို တိုးမြင့်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ ပစ်မှတ်ကို တိတိကျကျ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ လေယာဉ်တွေ ပိုရနိုင်ရေး ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့က မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေ ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 8:58 AM
အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ကုလသမဂ္ဂတပ် ဘက်လိုက်ဟု ရုရှားသမ္မတ ပြစ်တင် ပြောကြား
အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ဖြစ်ပွားသောပဋိပက္ခ များအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှု တပ်များက ဘက်လိုက်မှုရှိတယ်လို့ ရုရှားသမ္မတ ကပြစ်တင် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ။ " အိုင်ဗရီကို့စ်မှာရောက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂတပ်တွေဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို ကျော်လွန်ပြီး ဘက်တစ်ဘက်ကို အကူအညီပေးတာဟာ အင်မတန်အန္တရယ်ကြီးတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ် " လို့ ရုရှားသမ္မတ ဒမီဒရီ မီဒီဒက်ဖ် ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံကို BRICS အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဘို့ ရောက်နေတဲ့ ရုရှားသမ္မတ ဟာ သီးခြားတွေ့ဆုံမှုတစ်ခု မှာ ခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေ အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်မှု အပေါ်မှာ အလေးအနက် မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိလာတယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:58 AM
ပေးဝေသူနှင့် ဆက်ခံသူတို့၏ အေးအေးချမ်းချမ်း ၂၀၁၁ သင်္ကြန်
အနားယူသွားပြီဖြစ်သော ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး (ငြိမ်း)ကို မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဦးဘုန်းဇော်ဟန် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်တို့နှင့်အတူ မန္တလေးမြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်တွင် ပြုံးပြုံး ရွှင်ရွှင် တွေ့ရစဉ်
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 6:11 AM
EU မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကန့်သတ်ချက်အချို့ လျှော့ချခဲ့
ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့က ဥရောပသမဂ္ဂ ကောင်စီ COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် အရေးယူထားမှုကို တစ်နှစ် သက်တမ်းတိုးဖို့ ကိစ္စ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲကနေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်ထဲက အရေးကြီးတဲ့ အချက်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်-
၁။ အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိတာကို အသိအမှတ် ပြုပြီး မြန်မာ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေ ပိုကောင်းလာဖို့ အတွက် အကူအညီတွေ တိုးပေးမယ်။
၂။ အခြေခံ ဥပဒေသစ်အရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ အပြောင်းအလဲတွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်ပေါ်အောင်နဲ့ ဗဟုဝါဒ ပိုထွန်းကားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစိုးရသစ် အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ပိုမိုထွန်းကားတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကူးပြောင်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 7:54 AM
အာဖရိကယူနီယံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက် လစ်ဗျားသူပုန် သဘောမတူ
သူပုန်ခေါင်းဆောင် မတ်စ်တာဖာ အဗဒူ ဂျာလီ(အလယ်)
တောင်အာဖရိက သမ္မတ ဂျက်ကော့ ဇီးမား ( Mr.Jacob Zuma ) နှင့် အခြား ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၃ဦး ပါဝင်သော အာဖရိကယူနီယံ ခေါင်းဆောင်များသည် လစ်ဗျားသူပုန်များနှင့် ဆွေးနွေးရန် အတွက် လစ်ဗျားနိုင်ငံ ဘန်ဂါဇီ မြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီး ၄င်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်များကို သူပုန်အဖွဲ့က လက်မခံ ပယ်ချလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။
သူပုန်ခေါင်းဆောင်လဲဖြစ် လစ်ဗျားအစိုးရရဲ့ တရားရေးဝန်ကြီးဟောင်း လဲဖြစ်သူ မတ်စ်တာဖာ အဗဒူ ဂျာလီ (Mustafa Abdel Jalil) က မနေ့က ဘန်ဂါဇီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းမီဒီယာ များကို ခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ။"အာဖရိက ယူနီယံရဲ့ အဆိုပြုချက်ဟာ နိုင်ငံရေးပြန်လည်တည်ဆောက် ဘို့သက်သက်သာဖြစ်ပြီး ကဒါဖီ အာဏာစွန့်လွှတ်ရေး မပါတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သဘောမတူနိုင်ပါဘူး နောက်ပြီး AU ရဲ့ အဆိုပြုချက်ဟာ လစ်ဗျားပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ ကိုထင်ဟတ်စေတဲ့ အဆိုပြုချက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး " လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
သမ္မတ ဂက်ဘိုအား အဖမ်းခံရပြီးနောက် တွေ့ရစဉ်
အိုင်ဗရီကို့စ်သမ္မတ လောရင့် ဂက်ဘိုဟာ အတိုက်ခံခေါင်းဆောင် အလက်ဆန်း အောက်တရာ သစ္စာခံတပ်တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်အမည်ခံ ပြင်သစ်တပ်တွေရဲ့  တင့်ကားများ ဒုံးကျဉ်များတပ် ဆင်ထားသော ရဟတ်ယာဉ်များနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အဖမ်းခံခဲ့ ရတယ်လို့ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းများ အရသိရှိရပါတယ် ။
ယခုအခါ သမ္မတ ဂက်ဘိုဟာ အတိုက်ခံခေါင်းဆောင် အက်လက်ဆန် အောက်ထရာ ရုံးစိုက်ရာ Golf Hotel မှာ သူ့ရဲ့ဇနီး သားဖြစ်သူ မိုက်ကယ်နဲ့အတူ ရှိနေကြောင်း အတိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ Anne Ouloto က AFP သတင်းဋ္ဌာနကို အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ဒီဟော်တယ်ဟာ နှစ်ဘက်ပဋိပက္ခ များဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂ တပ်များက လုံခြုံရေး အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:57 AM
အာဖရိက ယူနီယံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက် ဗိုလ်မှူးကြီးကဒါဖီအစိုးရလက်ခံ
ကဒါဖီနှင့်၎င်းကိုထောက်ခံသူများအား တနင်္ဂနွေနေ့က တွေ့ရစဉ်
တောင်အာဖရိက သမ္မတ ဂျက်ကော့ ဇီးမား ( Mr.Jacob Zuma ) နှင့် အခြား ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၃ဦး ပါဝင်သော အာဖရိကယူနီယံ ခေါင်းဆောင်များသည် လစ်ဗျားအရေး ဆွေးနွေးရန် အတွက် လစ်ဗျားနိုင်ငံ ထရီပိုလီ မြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီး ၄င်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်များကို ဗိုလ်မှုးကြီး ကဒါဖီ ဦးဆောင်သော အစိုးရက လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များအားပြောကြားလိုက်ပါသည် ။
မစ္စတာဇီးမား က " ညီအကိုတော် ခေါင်းဆောင်ကြီး (ဗိုလ်မှုးကြီးကဒါဖီ) ရဲ့ အစိုးရက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းပြမြေပုံကို လက်ခံလိုက်ကြပါပြီ " ဟုသတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံ ရာတွင် ပြောကြားလိုက်ပါသည် ။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ယခုအခါ အတိုက်ခံသူပုန်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် ဘင်ဂါဇီ မြို့ သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ် ။
အာဖရိက ယူနီယံက အဆိုပြုခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံရဲ့ အဓိက အချက်တွေကတော့
အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့်ပြင်သစ်တပ်များက သမ္မတအိမ်တော်ကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်
အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ နှင့် ပြင်သစ် ပူးပေါင်းတပ်များက သမ္မတ အိမ်တော်ကို ဒီနေ့(ဧပြီလ ၁၀) ရက်မှာ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း ထိုသို့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သမ္မတ အိမ်တော် မီးလောင်ပြီးအတော်များများ ပျက်စီးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။
ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတော့ လက်ရှိသမ္မတ သစ္စာခံတပ်တွေဟာ အရပ်သားပစ်မှတ်တွေကို လက်နက် ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေရှိတာကြောင့် ခုလိုတုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်ရတာလို့ စွပ်စွဲပြောကြားလိုက် ပါတယ်။ လက်ရှိသမ္မတ ဂက်ဘိုရဲ့ ပြောခွင့်ရ သူကပြောကြားရာမှာတော့ ကုလတပ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သမ္မတ အိမ်တော် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့ပြီး သမ္မတ ဂက်ဘိုရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကိုတော့ ပြောဆို သွားခြင်းမရှိဘဲသူတို့အနေနဲ့ အရပ်သားပစ်မှတ်တွေကို ပစ်ခတ်နေတယ် ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုသွားပါတယ် ။
စနေနေ့အစောပိုင်းကတော့ လက်ရှိသမ္မတ ဂက်ဘိုရဲ့ တပ်တွေက ကုလတပ်တွေ အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ အတိုက်ခံခေါင်းဆောင် အလက်ဆန် အောက်တရာ နေထိုင်ရာ ဟိုတယ်ကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်းများကဆိုပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:22 PM
အမေရိကန် က အီရတ်ကိုကျူးကျော်မှု ၈ နှစ်ပြည့် ၊ ကျူးကျော်သူတို့ ထွက်သွားဟု ပြည်သူများတောင်းဆို
အမေရိကန်ကျူးကျော်မှု ၈နှစ်မြောက် ဆန္ဒပြပွဲများကျင်းပနေစဉ်
အီရတ်နိုင်ငံအား အမေရိကန်နှင့် အပေါင်းပါတပ်များ က ၂၀၀၃ ခုဧပြီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် ခဲ့ရာ ယခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ၈ နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျူးကျော်သူတို့ ယနေ့တိုင် အီရတ်နိုင်ငံ တွင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားခြင်းမရှိဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြကာ သိမ်းပိုက်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် ။ လက်ရှိ အီရတ်နိုင်ငံတွင် လက်နက် အပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားသော အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၅၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည် ။
အီရတ်နိုင်ငံအား အမေရိကန်နှင့် အပေါင်းပါတပ် များက ထိုစဉ်က သမ္မတ ဆက်ဒမ်ဟူစိန် အစိုးရတွင် နျူကလီးယား လက်နက်များရှိသည်ဟု၎င်း အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသည့် လက်နက်များပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ၄င်းစွပ်စွဲပြောဆိုကာ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အီရတ်ပြည်သူတို့၏ လုံခြုံရေး ကိုအကြောင်းပြကာ ၀င်ရောက်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ကျူးကျော် ၀င်ရောက်နိုင်စေရန်လည်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကခွင့်ပြုခဲ့သည် သာမက ၈နှစ်ကြာ ဆက်လက် သိမ်းပိုက်ထားမှုကိုပါခွင့်ပြုခဲ့သည် ။
ထိုသို့သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း တွင် အီရတ် ၌ ၄င်းတို့စွပ်စွဲခဲ့သလို မည်သည့်လက်နက်မျှရှိ မနေကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ထိုသို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ မှားယွင်းသော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သမ္မတဟောင်းဂျော့ရ်ှဘု ကနောက်ပိုင်းတွင် တရားဝင် ၀န်ခံခဲ့သည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:45 AM
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကြား စစ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား (Barack Obama) က လွှတ်တော်ကို တင်ပြဖို့ အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီဝင် ရီပါဘလစ်ကန်အမတ် ရစ်ချတ် လျူဂါ (Richard Lugar) က သောကြာနေ့မှာ အဆိုပြုချက်တရပ် တင်သွင်း တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း အဲဒီအဆိုပြုချက်ကို ရီပါပလစ်ကန်ပါတီက အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ ကန်တာကီပြည်နယ်က မစ်ခ်ျမက်ကောနဲလ် (Mitch McConnell) နဲ့ အိုကလာဟိုးမားပြည်နယ်က ဂျိမ်းစ် အင်ဟိုဖ် (James Inhofe) တို့နဲ့အတူ ပူးတွဲတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်တယ် လို့လဲသိရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတဘာသာနဲ့ ပြုစုရေးသားခဲ့တဲ့ စာပေတွေကို အစဉ်တစိုက် ဘာသာပြန်ပြီး မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ ရင်းနှီးစေခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး ပါရဂူဟာ ဒီကနေ့ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အသက် ၉၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာပါရဂူဟာ ရန်ကုန်မြို့ အာရှတော်ဝင်ဆေးခန်းမှာ ဒီကနေ့ မနက် ၉နာရီခွဲခန့် က ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာပါရဂူဟာ ဟင်္သာတခရိုင် သနွံသနော့ ကျေးရွာမှာ ၁၉၂၁ ခုနှစ်က မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းက ဦးလှကြိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ နှစ်သားအရွယ် ကိုယ်ရင်ဘ၀ကတည်းက စာပေဆောင်းပါးတွေကို စတင်ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ရဟန်းဘ၀မှာ ပါရဂူအမည်နဲ့ ဗုဒ္ဓစကား ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပြီးနောက် ၂ နှစ်အကြာမှာ လူထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာပါရဂူဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဟီန္ဒိဘာသာ စာပေကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သလို ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ အိနိယနိုင်ငံ ဗာရာဏသီ ဟိန္ဒူတက္ကသိုလ်ကို သွားရောက်ပြီး ဟိန္ဒီနဲ့ သက္ကတ စာပေတွေကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဟိန္ဒီနဲ့ သက္ကတ ကျန်းဂန်နဲ့ ၀တ္ထုတွေကို မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာပါရဂူဟာ ဘာသာပြန်ကျမ်း၊ ဘာသာပြန်ဝတ္ထု၊ ပင်ကိုယ်ရေးကျမ်း၊ ပင်ကိုယ်ရေးဝတ္ထု စုစုပေါင်း စာအုပ် ၁၀၀ ကျော် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး သုန္ဒရာနန္ဒ ခေါ် ညီတော်မင်းနန် စာအုပ်နဲ့ ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ အနုပညာဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်စာပေဆု ချီးမြှင့်ခံရသလို ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာတော့ ဂေါရီ ဆိုတဲ့ ဟန္ဒီဘာသာပြန် စာအုပ်နဲ့ အမျိုးသားစာပေဆုရခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:06 AM
Acer မှ touchscreen နှစ်ခု ပါဝင်သော laptop ထုတ်လုပ်
ထိုင်ဝမ် အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာထုပ်လုပ်သူ Acer Inc မှ Iconia Touchbook ဟုအမည်ရသော ပုံမှန် မော်နီတာအတွက် touch မျက်နှာပြင် တစ်ခုအပြင် ပုံမှန် ကီးဘုတ်နေရာတွင်ပါ ကီးဘုတ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သလို touch မျက်နှာပြင် အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် touchscreen နောက်တစ်ခု ပါဝင်သော dual-touchscreen laptop ထုတ်လုပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Acer Iconia Touchbook တွင် ပုံရိပ်ဖော်နိုင်စွမ်း 1366 x 768 pixels ရှိ dual LED-backlit touchscreen displays ပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင် ကြံ့ခိုင်မှု့ အတွက် Gorilla Glass ကိုသုံးပြုထားသည်။ Core i5 (480M/560M/580M) porcessor ကိုသုံးထားပြီး Intel HD graphics နှင့် မှတ်ဥာဏ် ပမာဏ 4GB ပါဝင်ကာ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းရန် သိုလှောင်မှု့ပမာဏမှာ 640GB အထိမြှင့်တင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:58 AM
ဒီကနေ့ဂျပန်စံတော်ချိန် ၂၃၃၂ ( GMT 1432) အချိန်တွင် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကလှုပ်ခဲ့သော နေရာနှင့် နေရာနှင့် သိပ်မဝေးသောနေရာ ဖူကူရှိးမား ၏ မြောက်ဘက် ၇၈ မိုင် (၁၁၈ ကီလိုမီတာ) အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟို ပြု၍ ပြင်းအား ၇.၁ မဂ္ဂနီကျူ့ရှိ မြေငလျင်တစ်ခု ထပ်မံလှုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
ငလျင်ဒဏ်ကို တိုကျိုမြို့အထိ ခံစားခဲ့ရပြီး လူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဖရိုဖရဲ အခြေအနေမှာ မရှိဘူးလို့ လည်းသိရပါတယ် ။
ငလျင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆက်တွဲ ဆူနာမီဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးများမှာ ၁ မီတာမှ ၂ မီတာခန့် အထိရှိနိုင် ကြောင်း သတိပေးချက်များထုတ်ပြန် ထားရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:04 PM
အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်
အမေရိကန်အစိုးရက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးတဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဒဲရက်မစ်ရှဲလ် (Derek Mitchell) ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မကြာခင် ခန့်အပ်တော့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်မယ့်သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
ဒီလိုခန့်အပ်ခြင်းအပေါ် စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးကိုကိုအောင်အား Voice Of Myanmar မှ သဘောထား မေးမြန်းခဲ့ ရာ ၄င်းက " ကျွန်တော်လဲဒီသတင်းကြားတယ် ..ဒီနေ့သတင်းတွေမှာပဲ အမေရိကန် ပြောခွင့်ရ သူတစ်ဦးက ဒီလိုခန့်အပ်တာဟာ မြန်မာအစိုးရသစ်ကို နိုင်ငံရေးအရ နီးနီးကပ်ကပ် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် အမေရိကန်က ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ပြောသွားတာ ကြားလိုက်ရသေးတယ်..ဒီလိုရှိတယ်ဗျ..အမေရိကန်ကနေ နိုင်ငံရေးအရတကယ်နီးနီးကပ်ကပ် ဆောင်ရွက်ချင်
တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး တစ်ဦး ခန့်ရမယ်လေ..ခုတော့ သံအမတ်ကြီးမခန့်ပဲ သံတမန် အဆင့်လျော့ချဆက်ဆံ ထားတယ် ဒါကိုအရင်မလုပ်ဘဲနဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်တယ်ဆိုထဲက နောက်ကွယ်မှာ အကြံတစ်ခုခု ရှိနေမယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ယူဆတယ်.." ဟုပြောကြားပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 5:03 PM
သတင်းဖန်တီးမှု ပညာနှင့် ဂျပန်ဆူနာမီ မှ ခွေးတစ်ကောင် ကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ ကဖြစ်ပါသည် ။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ငလျင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲ ဆူနာမီကြောင့် သေကြေ ပျောက်ဆုံးသူများအား နောက်ဆုံးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ကယ်ဆယ်ရေးအင်အားစုများက အင်အားသုံး ကာ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည် ။ထိုသို့ ရှာဖွေရာတွင် အသက်ရှင်လျက်ရှိသူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရတော့ပါ ၊ထို့အပြင် ရုပ်အလောင်းများလည်းရှာဖွေ မတွေ့ရတော့ပါ ။သို့သော် ခွေးတစ်ကောင်ကို ကယ်ဆယ်ရရှိသည့် သတင်းသည် ကမ္ဘာ့ မီဒီယာများတွင် ထိပ်တန်း သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါသည် ထိုသတင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ငလျင်နှင့် ဆူနာမီ ရေလှိုင်းဒဏ်သင့်ပြီး သုံးပတ်အကြာ တွင် ခွေးအား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
ငလျင်နှင့်ဆူနာမီရေလှိုင်းဒဏ်ခံရသော ဂျပန်၏ မြောက်ပိုင်းဒေသမှ သတင်းကောင်း လေးတစ်ပုဒ်မှာ ကမ်းစောင့်တပ် (Coast Guard) မှ အပျက်အစီးများကြားတွင် မျောနေသော ခွေးတစ်ကောင်အား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 5:00 AM
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်လက်လုပ် ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံး အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့
ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတား မြို့နယ် ဆူးလေ ဘုရားလမ်း ကားမှတ်တိုင် တစ်ခု အနီးရှိ ရေတမာပင် အုတ်ခုံပေါ်မှ လက်လုပ်ဗုံး တစ်လုံးကို ဧပြီ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် တာဝန် ရှိသူများက အချိန်မီ ဖယ်ရှားရှင်းလင်း နိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် လူထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်တွင် ဆူးလေ ဘုရားလမ်း ဇင်ယော် ကားမှတ်တိုင် အနီးရှိ ရေတမာပင် အုတ်ခုံပေါ်၌ နှင်းဆီပန်း အပွင့် ၂ဝ ခန့်ကိုတင်လျက် အောက်တွင် ဇစ်ပိုမီးခြစ် ဓာတ်ငွေ့ရည် ပြည့်ဘူး နှစ်ဘူး၊ သုတ်ဆေး အနီရောင် ဆေးဘူး နှစ်ဘူးတို့အား စုပုံထားသည့် နေရာမှ ဂက်စ်မီးခြစ် ပေါက်သံကဲ့သို့ အသံ နှင့်အတူ မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်ဆင့် သတင်း ပို့ချက်အရ တာဝန်ရှိသူများ ရောက်ရှိပြီး ထပ်ဆင့် ဖောက်ခွဲရန် တပ်ဆင်ထားသည့် လက်လုပ် ချိန်ကိုက်ဗုံး တစ်လုံးအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်း နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:49 AM
ကုလသမဂ္ဂ က အိုင်ဗရီကို့စ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းနေတယ်တဲ့လား ???
အိုင်ဗရီကို့စ် နိုင်ငံတွင်း လက်ရှိသမ္မတနဲ့ အတိုက်ခံကြားတိုက်ပွဲတွေဟာ တနင်္လာနေ့မှာ အတော်လေး ပြင်းထန်လာပါတယ်။ လက်ရှိသမ္မတ လောရင့် ဘက်ဂ်ဘို (Laurent Gbagbo) အခြေစိုက် နေရာတွေကို ကုလသမဂ္ဂ တပ်တွေက အတိုက်ခံတပ်တွေနဲ့အတူ တိုက်ခိုက်နေသလို သမ္မတ ဘက်ဂ်ဘိုတပ်တွေ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ နေရာအချို့ကို သိမ်းယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
အဘိုက်ဂျန် (Abidjan) မြို့တွင်းက သမ္မတအိမ်တော်၊ သမ္မတ ဘက်ဂ်ဘို နေထိုင်ရာနေရာနဲ့ ဘက်ဂ်ဘို တပ်စခန်း နှစ်ခုကို ကုလသမဂ္ဂတပ်က ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပန်ကြားချက်နဲ့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ သူတို့တပ်အင်အားတွေ ပါဝင်လာရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြင်သစ်က ပြောပါတယ်။
အရပ်သားတွေနဲ့ ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အခုလို တိုက်ခိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။